သိပ္ပံနည်းကျကျ ယောင်းအပေါ်အချစ်တွေ ပြိုဆင်းလာအောင်လုပ်နိုင်မယ့်အချက်(၆)ချက် - For her Myanmar
အချစ်ဆိုတာနွေးထွေးကြင်နာမှုတွေ ၊ ရင်းနှီးမှုတွေကနေ စတင်လာတယ်လို့ပဲ ဆိုရမလား?? လူတော်တော်များများက အချစ်ကို ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့ တရင်းတနှီးနဲ့ နွေးထွေးကြင်နာတတ်တဲ့သူတွေကို ပိုအလေးပေးပြီး ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ယောင်းတို့ချစ်နေသူတွေအပေါ်မှာလည်း ဒီလိုခံစားမှုတွေ လွှမ်းမိုးခံရပြီး ယောင်းတို့အပေါ်စိတ်ယိုင်လဲလာစေဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကို ဖြူသန့်ကဝေမျှပေးသွားပါမယ်။
ပထမဆုံးချိန်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာ ကော်ဖီပူပူလေးမှာသောက်တာက နွေးထွေးတယ်လို့ ခံစားရစေပါတယ်။ နွေးထွေးတဲ့နေရာ၊ အစားစာ၊ နွေးထွေးတဲ့အရာတွေက လူတွေကိုပိုပြီး သတိတရမှတ်မိနေစေလို့ပါ။
မျက်ဝန်းဆိုတာစိတ်ရဲ့ တံခါးပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးချင်းဆက်သွယ်တာက အချစ်တွေပိုတိုးစေပါတယ်တဲ့။ မျက်ဝန်းကိုကြည့်တာနဲ့ဘာပြောချင်လဲ၊ ဘယ်လိုစိတ်ခံစားနေရလဲ၊ လိမ်ပြောနေလားဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲ ၇၅%က မျက်လုံးကြည့်လိုက်တာနဲ့ အချင်းချင်းနားလည်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချစ်မှာပျော်ဝင်ဖို့ဆိုရင် မျက်လုံးချင်း ဆက်သွယ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
(၃) အရှိအတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေပါ။
ချိန်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာ ကြောက်နေတာတွေ၊ ကိုးရိုးကားရားနိုင်တာတွေ၊ အကျင့်ဆိုးလေးတွေကို ဖုံးကွယ်ထားစရာမလိုပါဘူး။ အလွဲလေးတွေကို ဟာသအဖြစ်ပြောရင်း တစ်ဖက်လူစိတ်ထဲမှာမှတ်မှတ်ရရ ထင်ကျန်နေစေမှာပါနော်။
နှစ်ယောက်ထဲသိတဲ့ ဘာသာစကားပြုလုပ်ထားတာက ပိုနွေးထွေးပြီး ရင်းနှီးတယ်လို့ခံစားရစေမှာပါ။ အကြိုက်တူဖြစ်နိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဟာသတွေ ၊ သီချင်းတွေ၊ စာအုပ်တွေကိုပြောပြီး ဒီနာမည်လေးတွေနဲ့ လျှို့ဝှက်ဘာသာစကားဖန်တီးလိုက်ရင်တော့ တွေ့တာမကြာသေးပေမဲ့လည်းအရမ်းရင်းနှီးနေသလို ခံစားရစေမှာပါနော်။
Related Article>>> အချစ်က ကျန်းမာရေး ကောင်းစေလား?
အကောင်းမြင်တာက တစ်ဖက်လူရဲ့ယုံကြည်မှုကို ပိုရစေမှာပါ။ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင် အဆိုးမြင်ပြီးအပြစ်တင်စကားပြောမဲ့အစား နွေးထွေးတဲ့စကားတွေပြောရင်းနဲ့ ဝိုင်းဖြေရှင်းပေးတာက တစ်ဖက်သူရဲ့စိတ်ထဲကို စွဲမြဲနေအောင်မှတ်မိနေစေလို့ သူ့ဆီကအချစ်ကိုရဖို့ ပိုလွယ်ကူစေမှာပါ။
အရမ်းမရင်းနှီးသေးတဲ့အချိန်မှာ တစ်ဖက်သူဆီကို ဖုန်းစဆက်တာတွေ၊ စာအရင်ပို့တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။ ဖုန်းစောင့်နေတာနဲ့လည်း အချိန်တွေမကုန်စေပါနဲ့။ စောင့်နေရတယ်ဆိုတာ စိတ်ကိုပိုထိခိုက်စေလို့ တခြားမှာအာရုံစိုက်ပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေသင့်ပါတယ်။ တစ်ဖက်က ဖုန်းစဆက်လာရင်လည်း ချက်ချင်းဖုန်းကိုင်တာမလုပ်ဘဲ Miss call ၁၀ ခါလောက်ဖြစ်မှ ဖုန်းကိုင်တာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။ဒီလိုအပြုမူတွေကြောင့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်ဖို့ပိုကြိုးစားမိသလို relationship တစ်ခုမှာ ဘာတွေအရေးကြီးလဲဆိုတာကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
ယောင်းတို့ချစ်တဲ့သူတွေ စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေပြောပြပြီးပြီဆိုတော့ ကျန်တာကယောင်းတို့တာဝန်ပါပဲလို့။ အချစ်တစ်ခုတည်မြဲဖို့ဆိုရင်တော့ နားလည်မှုတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေ၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ၊သစ္စာရှိမှုတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်သွားကြပါလို့ အကြံပေးရင်း……..
အခဈြဆိုတာနှေးထှေးကွငျနာမှုတှေ ၊ ရငျးနှီးမှုတှကေနေ စတငျလာတယျလို့ပဲ ဆိုရမလား?? လူတျောတျောမြားမြားက အခဈြကို ရှေးခယျြတဲ့နရောမှာတော့ တရငျးတနှီးနဲ့ နှေးထှေးကွငျနာတတျတဲ့သူတှကေို ပိုအလေးပေးပွီး ရှေးခယျြတတျကွပါတယျ။ ဒီတော့ ယောငျးတို့ခဈြနသေူတှအေပျေါမှာလညျး ဒီလိုခံစားမှုတှေ လှမျးမိုးခံရပွီး ယောငျးတို့အပျေါစိတျယိုငျလဲလာစဖေို့ ဘယျလိုလုပျဆောငျရမလဲဆိုတာကို ဖွူသနျ့ကဝမြှေပေးသှားပါမယျ။
ပထမဆုံးခြိနျးတှတေဲ့အခြိနျမှာ ကျောဖီပူပူလေးမှာသောကျတာက နှေးထှေးတယျလို့ ခံစားရစပေါတယျ။ နှေးထှေးတဲ့နရော၊ အစားစာ၊ နှေးထှေးတဲ့အရာတှကေ လူတှကေိုပိုပွီး သတိတရမှတျမိနစေလေို့ပါ။
မကျြဝနျးဆိုတာစိတျရဲ့ တံခါးပေါကျဖွဈပါတယျ။ မကျြလုံးခငျြးဆကျသှယျတာက အခဈြတှပေိုတိုးစပေါတယျတဲ့။ မကျြဝနျးကိုကွညျ့တာနဲ့ဘာပွောခငျြလဲ၊ ဘယျလိုစိတျခံစားနရေလဲ၊ လိမျပွောနလေားဆိုတာ ခနျ့မှနျးလို့ရပါတယျ။ အရမျးခဈြကွတဲ့ ခဈြသူစုံတှဲ ၇၅%က မကျြလုံးကွညျ့လိုကျတာနဲ့ အခငျြးခငျြးနားလညျတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခဈြမှာပြျောဝငျဖို့ဆိုရငျ မကျြလုံးခငျြး ဆကျသှယျပေးဖို့မမပေ့ါနဲ့နျော။
(၃) အရှိအတိုငျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနပေါ။
ခြိနျးတှတေဲ့အခြိနျမှာ ကွောကျနတောတှေ၊ ကိုးရိုးကားနိုငျတာတှေ၊ အကငျြ့ဆိုးလေးတှကေို ဖုံးကှယျထားစရာမလိုပါဘူး။ အလှဲလေးတှကေို ဟာသအဖွဈပွောရငျး တဈဖကျလူစိတျထဲမှာမှတျမှတျရရ ထငျကနျြနစေမှောပါနျော။
နှဈယောကျထဲသိတဲ့ ဘာသာစကားပွုလုပျထားတာက ပိုနှေးထှေးပွီး ရငျးနှီးတယျလို့ခံစားရစမှောပါ။ အကွိုကျတူဖွဈနိုငျတဲ့ ရုပျရှငျတှေ၊ ဟာသပှဲတှေ၊ သီခငျြးတှေ၊ စာအုပျတှကေိုပွောပွီး ဒီနာမညျလေးတှနေဲ့ လြှို့ဝှကျဘာသာစကားဖနျတီးလိုကျရငျတော့ တှတေ့ာမကွာသေးပမေဲ့လညျးအရမျးရငျးနှီးနသေလို ခံစားရစမှောပါနျော။
Related Article>>> အခဈြက ကနျြးမာရေး ကောငျးစလေား?
အကောငျးမွငျတာက တဈဖကျလူရဲ့ယုံကွညျမှုကို ပိုရစမှောပါ။ ပွဿနာတဈခုဖွဈရငျ အဆိုးမွငျပွီးအပွဈတငျစကားပွောမဲ့အစား နှေးထှေးတဲ့စကားတှပွေောရငျးနဲ့ ဝိုငျးဖွရှေငျးပေးတာက တဈဖကျသူရဲ့စိတျထဲကို စှဲမွဲနအေောငျမှတျမိနစေလေို့ သူ့ဆီကအခဈြကိုရဖို့ ပိုလှယျကူစမှောပါ။
အရမျးမရငျးနှီးသေးတဲ့အခြိနျမှာ တဈဖကျသူဆီကို ဖုနျးစဆကျတာတှေ၊ စာအရငျပို့တာတှမေလုပျပါနဲ့။ ဖုနျးစောငျ့နတောနဲ့လညျး အခြိနျတှမေကုနျစပေါနဲ့။ စောငျ့နရေတယျဆိုတာ စိတျကိုပိုထိခိုကျစလေို့ တခွားမှာအာရုံစိုကျပွီး မမေ့ပြေ့ောကျပြောကျနသေငျ့ပါတယျ။ တဈဖကျက ဖုနျးစဆကျလာရငျလညျး ခကျြခငျြးဖုနျးကိုငျတာမလုပျဘဲ Miss call ၁၀ ခါလောကျဖွဈမှ ဖုနျးကိုငျတာမြိုးလုပျသငျ့ပါတယျ။ဒီလိုအပွုမူတှကွေောငျ့ တဈဦးနဲ့တဈဦး နားလညျဖို့ပိုကွိုးစားမိသလို relationship တဈခုမှာ ဘာတှအေရေးကွီးလဲဆိုတာကို နားလညျလာပါလိမျ့မယျ။
ယောငျးတို့ခဈြတဲ့သူတှေ စိတျကိုလှမျးမိုးနိုငျမယျ့ အခကျြလေးတှပွေောပွပွီးပွီဆိုတော့ ကနျြတာကယောငျးတို့တာဝနျပါပဲလို့။ အခဈြတဈခုတညျမွဲဖို့ဆိုရငျတော့ နားလညျမှုတှေ၊ ယုံကွညျမှုတှေ၊ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှေ၊သစ်စာရှိမှုတှနေဲ့ ရှဆေ့ကျသှားကွပါလို့ အကွံပေးရငျး……..
Tags: Crush, eye, Food, Happy, language, love, miss call, Positive, Warm